Ibhuloho le Tollgate yaseThekwini (Ingxenye Yesibili) - Durban Local History Museums
Ibhuloho le Tollgate yaseThekwini (Ingxenye Yesibili)
By Durban Local History Museums25th May 2021Articles
Enyangeni eyedlule sibhale ngomlando we-Tollgate Bridge yase Thekwini edumile, kanye nokuthi igama lalo laqanjwa kanjani leli elime kumgwaqo obubizwa nge-Berea Road kodwa manje osubizwa nge (King Dinuzulu Road). Le “tollgate” iphanyekwe ngonyaka ka 1866 ukuze kuzokwazi ukuthi abantu bakhokhele ukuqiniswa komgwaqo, kanti uduze kwayo le-Toll gate kunendlu yakhona eme nje eceleni kwakhona. Umuntu owayeqaphe yona le-toll gate wayehlala kulendlu eseduze kwayo, khona ezokwazi ukuqoqa imali ebusuku nasemini, imali eyayikhokhwa abasebenzisa lomgwaqo omusha.
Kuthe ekugcineni ngonyaka ka 1901, yabe isidilizwa i-toll gate, lokho okwakusho khona ukuthi nesidingo sendlu yakhona sabe singasekho. Iminyaka eminingi bekucatshangelwa ukuthi lendlu ye-toll gate nayo idiliziwe, kodwa kuthe ngeminyaka yama 1970s uNkosikazi u-Daphne Strutt wathola ukuthi lendlu isekhona futhi isaphila endaweni yase-Kloof!
UNkosikazi u- Strutt wayekade eqashwe njengoMlondolozi we-Natal Settlers Old House Museum (Manje esibizwa ngokuthi Old House Museum), kanti ke umsebenzi wakhe kwakuwu kwenza lendawo yokugcina amagugu nomlando ibe sesimeni esihle. Kuthe ngeminyaka yo 1960 wabe esezibandakanya nomkhankaso wokulwela ukuthi inkantolo endala yaseThekwini ingadilizwa ngalenkanti umkhandlu waseThekwini uzama ukuba idilizwe khona kuzokwenziwa indawo yokupaka izimoto zamakhansela akhona. Imizamo yakhe ayiphelelanga emoyeni njenge zithukuthuku zengcanga ngoba phela kwagcina kwenzeke njengokufisa kwakhe. Ngokuhamba kwesikhathi wase esedlala indima yokuba umlondolozi wendawo yokugcina amagugu nomlando manje ebizwa ngokuthi (Old Court House Museum).
Kwaba iqhaza lakhe njengo mlondolozi elenza uNkk Strutt azithole esethula inkulumu eKloof ngonyaka ka 1970, emva kokuba ethule ukuthi izingodo Kanye nothayela wendlu ye-toll gate yayisalile ingadilizwanga! Okwakwaziwa nje ukuqaleni ukuthi nje ngo 1901 lendlu yahlukaniswa yaphinde yadilizwa yabe isifakwa enqoleni ngalenkathi idayiswa. Kubonakala ukuthi lendlu yaphinde yahlanganiswa endaweni ese-Kloof Falls Drive, nokuyilapho eyahlala khona lokholokho.
Ekuqaleni kweminyaka yama 1970, abashadikazi ababili ababesebasha uAlain kanye no Rosslyn Rouillard, babekade befuna umhlaba wokwakha eKloof ngalenkathi bethola umhlaba onezingodo ezindala kanye nekotishi eyakhiwe ngothayela. Lesakhiwa sase sithe ukonakala, kodwa ke sakwazi ukuba sibe isidleke sokuba lezithandani zihlale khona ngalenkathi zisenza imizamo yokuthi zakhe kahle umuzi ezizohlala kuwona njengekhaya lazo elisha.
Ngesikhathi sokushicilelwa kwaloludaba lokuphinde kutholwe lendleu eRestorica, okuyiphephabhuku leSimon van der Stel Foundation namhlanje esibizwa ngokuthi inhlangano yamagugu eNingizimu Afrika (Heritage Association of South Africa), abakwa Rouillards ngalenkathi base bethi bazoqala ukwakha umuzi wabo omusha. kwaba ishwa ke, ukuthi lendlu “toll house” kwaphoqa ukuba igcine idiliziwe ukuze ivulele indawo yesakhiwo esisha. Izakhamuzi eziningi zaseKloof zabe seziphuma umkhankaso wokuthi zithulele lendlu indawo lapho ezobekwa khona, naye uNkk Struff waze wazama nokuthi anikezele ngayo lendlu, ngoba phela ngaleso sikhathi yayisigcinwe emva kwendawo endala yokugcina amagugu (Old House Museum).
Ngeshwa ke, namanje akwaziwa ukuthi imizamo yezakhamuzi yaba impumelelo yini yokuthola umhlaba okuzobekwa kuwona lendlu lena. Uma kukhona kunina bafundi balengosi yethu onolwazi ukuthi kwagcinelaphi ngalesakhiwo, sicela asazise lana enzansi kulesikhala sokubhala imbono.
Izithombe ngabakwa www.geocaching.com, sanationalsociety.co.za kanye www.theheritageportal.co.za